Socodka cagaf Rotary Tiller
4 Cagaf cagaf 2WD Mini cagaf
4 Cagaf-cagaf 4WD Mini cagaf
Mashiinka Qodida Iyo Bacriminta
Mashiinka Xabaal Canabka
Qalabka tilifoonka wareejintu waa nooc ka mid ah mashiinnada qodista kaas oo ku dhammayn kara shaqada qabashada iyo raacitaanka cagaf. Si aad ah ayaa loo isticmaalay sababtoo ah awooddeeda xoogan ee jabinta carrada iyo dusha sare kadib markii la faqay. Isla mar ahaantaana, way goyn kartaa jajabku ku duugan yahay dusha sare, taas oo ah c ...
Waxaa naloola dhaqmay muuqaalka cajiibka ah ee laamaha geedaha la jarjaray oo si deg deg ah u shiiday dhagxaanta alwaaxa, iyaga oo u badalay jajabyo yar yar oo qoryo ah dhawr ilbiriqsi gudahood. Dukumentiga Dhexe ee 1aad wuxuu qeexay jihada loogu talagalay horumarinta beeraha, miyiga iyo beeralayda. Anaga...
Waxaa saameeyay dillaacii labaad ee COVID-19, dadka dibadaha ku nool waxay bilaabeen "ganacsi khudrad" u gaar ah. Isbeddelka lagu beerayo khudaarta guriga waxay ka timid xiritaankii ugu dambeeyay ee magaalada iyo sahayda oo yaraatay. Markan, dadka dibedda ku nool waxay cusbooneysiiyeen hababkooda koritaanka ...
Burush Cutter Grass: mashiin ujeeddo badan leh ayaa lagu waafajin karaa madaxa ciida ee dabacsan, wheel jarista, mindi diil. Si ballaaran ayaa loogu isticmaali karaa beero canab ah, beero canab ah, beero, beero, saldhigyo khudradeed, beero shaah, dhul beereed iyo deegaanno kale. Mashiinka ayaa yar oo miisaankiisu fudud yahay. Haweenka guri joogta ah ee caadiga ...
Halabuurka iyo mabda'a shaqada mashiinka fogging 1. Mashiinka qallajiya wuxuu inta badan ka kooban yahay afar qaybood: biyo, wareeg, wadada saliidda, wadada gaaska. Oo ay ku jiraan: carburetor, mashiinka iyo tuubada qarxa, tuubada kuleylka, daboolka kuleylka, kuleylka, haanta shidaalka, sanduuqa dawada dareeraha ah, sanduuqa wax lagu qabto, daawada dareeraha ah ...
Cagaf-cagafyadu waa mashiinno awood iswada oo loo isticmaalo in lagu jiido oo lagu wado mishiinnada shaqeeya si loo dhammaystiro howlaha kala duwan ee moobiilka. Sidoo kale wuu qaban karaa shaqada ujeeddada joogtada ah. By engine, gudbinta, socodka, isteerinka, hakin Haydarooliga, wax soo saarka korontada, qalabka korontada, xakamaynta wadista iyo tracti ...
Wareegtada Rotary waxay leedahay awood xoogan oo jarista iyo jarista carrada, taas oo ku guuleysan karta saameynta carrada ee lagu guuleysan karo oo kaliya dhowr jeer oo ah howlaha guud iyo qodista. Ka sokow, dusha sare waa mid siman oo jilicsan ka dib markii meertada Rotary, kaas oo la kulmi kara shuruudaha degdegga ah ee t ...
Cagaf Socodka waa nooc ka mid ah gaadiidka iyo mashiinada beeraha caan ku ah tuulooyinka iyo magaalooyinka Shiinaha. Cabbirkiisa yar iyo kan dabacsan iyo awood xoogan ayaa ka dhigaya mid caan ku ah beeralayda. Waxay u jeesataa xajinta inta badan waxay kuxirantahay silsiladaha bidix iyo midig, taas oo ka duwan s ...
Mashiinka tolidda waa qodidda, ciidda, bacriminta, is-dhexgalka dib-u-buuxinta ee mashiinnada beeraha yar-yar, cagaf-cagafyada yar-yar ee caadiga ah ee awoodda, saddex-dhibcood oo ganaax ah mashiinka qodista nooca saddex-geesoodka ah, mashiinka maqalka maqalka oo labalaab ah Qoto dheerida godku waa qiyaastii 35 cm. Shichao dhogorta ...
Cinwaanka Warshad: Shaowengmiao Village, Magaalada Junbukou, Degmada Weicheng, Magaalada Weifang, Shandong, Shiinaha
Cinwaanka Xafiiska: Room1608, Jintai Building, Northwest Corner ee Isgoyska Dongfeng West Street iyo Changsong Road, Degmada Weicheng, Magaalada Weifang, Gobolka Shandong
Telefoonka Xafiiska: 86-0536-2100684